Home Wararka R/W Rooble oo dalka ka ceyriyey wakiilka Midowga Afrika Francisco Madeira
R/W Rooble oo dalka ka ceyriyey wakiilka Midowga Afrika Francisco Madeira
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dalka ka ceyriyey wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira, wuxuuna u qabatay inuu dalka uga baxo muddo 48 saac gudahood.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ka codsaday guddiga Midowga Afrika inuu dib ugu yeerto danjire Francisco Madeira uuna u hoggaansamo codsigan.
“Waxaan soo dhoweeneynaa howlgalka cusub ee ATMIS, waxaana sugyenaa inaan la shaqeyno madaxa cusub ee howlgalka,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Rooble.
Cayrinta danjire Francisco Madeira ayaa timid shan bilood kadib markii sidoo kale dowladda federaalka ay cayrisay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo oo la eryey 4-tii November 2021.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Simon Mulongo ku eedeysay “inuu ku lug yeeshay dhaq-dhaqaaqyo aan waafaqsaneyn waajibaadka AMISOM iyo istiraatiijiyadda amniga Soomaaliya.”
“Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay bogaadin usoo jeedineysaa Guddiga Midowga Afrika, waxaana sharaf u ah inay la socodsiiyaan Guddiga, in shaqsiga hoos ku qoran [Simon Mulongo] laga dhigay ‘persona non grata’.”
Previous articleIska hor imaad u dhexeeya ciidanka NISA & AMISOM oo Xalane ka jira
Next articleFarmaajo oo ka horyimid go’aankii uu Rooble ku eryey ergeyga Midowga Afrika
Abiy Axmed iyo Uhuru Kenyatta oo si weyn loogu soodhaweeyay Magaalada...
Xiisad Dagaal oo kataagan Matabaan kadib dil halkaa ka dhacay